Diamond egweri akpụkpọ ụkwụ Nsukka na Suppliers | China Diamond egweri akpụkpọ ụkwụ Factory
2021 kacha ọhụrụ imewe 3 ″...
10 ″ TGP Cup Diamond G...
7 inch Ugboro abuo ahiri diamond G...
4 ″ diamond mgbachi Snail...
HTC egweri akpụkpọ ụkwụ nwere okpukpu abụọ Bar
Akpụkpọ ụkwụ diamond abụọ a na-egweri aghọọla ngwá ọrụ egweri diamond kacha ewu ewu na-egweri ihe. N'ihi na ha nwere ike ikpuchi eserese square kachasị na ọnụ ala dị ala. Enwere ike iji akpụkpọ ụkwụ HTC diamond na-egweri okpukpu abụọ, nkekọ ya dịgasị iche site na nro ruo ike.
HTC Arrow Akụkụ ihe egweri akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ akụ nwere akụkụ nwere akụkụ dị nkọ nke na-eduga maka ịkpụcha, gweri na ịchacha n'otu oge. Tinyere ola diamond ha na-adịghị ahụkebe, nke a na-eme ka ha na-eme ihe ike, dị mma maka iwepụ gluu na iwepụ ngwa ngwa nke akwa akwa. Ntinye nke ngalaba na-enyekwa ohere maka ndụ kachasị.
HTC egweri akpụkpọ ụkwụ nwere okpukpu abụọ hexagon
HTC diamond egweri akpụkpọ ụkwụ na-eji HTC ihe n'ala grinders, ha nwere ike tinye n'ọrụ na nnukwu-size ihe, terrazzo n'ala wepụ epoxy, mkpuchi na gluu na ya. Ọmarịcha arụmọrụ yana dị mfe iji rụọ ọrụ. Usoro dị mma na-eme ogologo oge, ịdị nkọ na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
3 inch metal bond 10 segments diamond egweri diski maka ihe n'ala praparation
3 "Beveled Edge Segments Diamond Floor Grinding Discs na-eji nke ọma maka iwepụ lippage n'ala na-egweri dị arọ, na-eme ihe ike na nke ọma na-egweri gafee oghere na n'ọnụ iji zere ibe, na 7.5mm ọkpụrụkpụ nke diamond ihe onwunwe, ha nwere ike na-egweri puku kwuru puku square ụkwụ. elu
3 inch 10 Akụkụ Diamond Concrete egweri diski
Ndị a pucks na-emekarị haziri dị ka 10 ngalaba ma ọ bụ kpọmkwem nọmba na udi dị ka ndị ahịa chọrọ. High Performance Pucks e mere maka ogologo ndụ na ike ike egweri. N'ezie, horsepower chọrọ maka grinder bụ nnọọ ukwuu.
Blastrac Concrete Floor diamond egweri akpụkpọ ụkwụ
Blastrac diamond egweri akpụkpọ ụkwụ, nwere ike iji na Blastrac grinder. Na ụdị dị iche iche akụkụ. Ugboro abụọ bọtịnụ, akụ, Ogwe maka n'ala grinder.These metal bond-egweri agba nwere ike ma akọrọ na mmiri ojiji. Grits 6#~300# dị
Ahịa Na-ekpo ọkụ Nkeji Ugboro Abụọ Akpụkpọ ụkwụ Na-egweri Maka igwe Blastrac
Nke a trapezoid metal bond bond diamond egweri akpụkpọ ụkwụ bụ tumadi emebere maka The Blastrac ala grinders. Eji mara mma nkọ na ogologo ndụ. Akụkụ diamond a haziri nke ọma nwere oke dayamọnd ọkwa ụlọ ọrụ na-eme ka arụ ọrụ dị mma.
Akụkụ Ogwe okpukpu abụọ Blastrac diamond egweri akpụkpọ ụkwụ
Diamond Concrete-egweri efere bụ ihe kasị mma ngwọta maka nnukwu ebe nke mkpa mkpuchi mwepụ, larịị na smoothing elu tụrụ na konkret, na-arụ ọrụ nke ọma maka ihe nhicha. Emebere akụkụ ha maka ịhịa aka ike nke ihe iji mee obere ọrụ nke nnukwu ọrụ gị.
Agba okirikiri okpukpu abụọ Trapezoid diamond egweri akpụkpọ ụkwụ
Nke a trapezoid okpukpu abụọ gburugburu akụkụ diamond egweri akpụkpọ ụkwụ bụ tumadi haziri maka egweri ihe na terrazzo ala. Amara ya site na ịrụ ọrụ dị elu yana ogologo ndụ dị elu. Agbụ dị iche iche dị iji kwado elu ala siri ike dị iche iche.
Trapezoid Diamond egweri efere akpụkpọ ụkwụ maka ihe eji eme ala
A na-eji paịlị diamond eme ihe site na nkwadebe elu ala, na-egweri na polishing ihe & terrazzo nwere arụmọrụ na mmepụta dị mma, imewe akụkụ okirikiri na-adịgide adịgide na enweghị ntụpọ miri emi hapụrụ n'elu ala.
Redi mkpọchi diamond egweri akpụkpọ ụkwụ maka Husqvarna ala grinder
Redi Lock diamond egweri ngwá ọrụ kọmpụta n'ala pad e mere maka ihe na terrazzo n'ala egweri, nakwa dị ka wepụ epoxy, gluu, agba si n'ala elu. Ogologo akụkụ 13mm na-eme ka ọ nwee ogologo ndụ ọrụ, redi mkpọchi nkwado imewe na-enye ohere mgbanwe ngwa ngwa.
3-M6 bolted diamond egweri akpụkpọ ụkwụ maka ihe n'ala
Diamond Concrete Floor-egweri efere bụ ihe ngwọta kasị mma maka nnukwu ebe nke mkpa mkpuchi mkpuchi, larịị na smoothing elu tụrụ na sink, na-arụ ọrụ nke ọma maka ihe nhicha. Emebere akụkụ ha maka ịhịa aka ike nke ihe iji mee obere ọrụ nke nnukwu ọrụ gị.